Amisom oo ka hadashay dadka ay ku laayeen Shabellaha hoose – STAR FM SOMALIA
Amisom oo ka hadashay dadka ay ku laayeen Shabellaha hoose
Howlgalka Midowga Afrika Somaliye ee Amisom,ayaa ka hadlay fal ay shalay gelinkii dambe ciidan ka tirsan Midowga Afrika ka geysteen deegaanka Calamada ee Gobolka Shabellaha hoose.
War la soo dhigay barta Twitter-ka Amisom,ayaa lagu sheegay in Amisom ay ka xun tahay falkii ka dhacay Calamada shalay gelinkii dambe.
Waxaa intaas ay ku dartay Amisom in falkaas uu ahaa shil gaari oo ka dhacay waddada xiriirisa Afgooye iyo Muqdisho,kaas oo uu ku lug lahaa mid ka mid ah Gaadiidka ay wataan Ciidanka Amisom ee jooga Somaliya.
Sidoo kale warka ayaa intaas ku daraya in Amisom ay baaritaan ku heyso arintaas,islamarkaana xogta ka soo baxda ay dhawaan la wadaagi doonto Warbaahinta.
Gaari ka mid ah kuwa Amisom ayaa shalay gelinkii dambe jiiray Gaari Homey ah oo ay saarnaayeen dad shacab ah,kaas oo ay ku dhinteen 10 qof 15 kalena ay ku dhaawacmeen.
Dhacdooyinka naxdinta leh ee ciidamada Amisom ay ka geysanayaan Gobolka Shabellaha hoose, ayaa sii kordhaya, waxayna Amisom hadalkooda ku soo koobaan kaliya inay baaris ku sameynayaan waxa dhacay.
Falal kala duwan oo tacadi ah ayey horay uga geysteen Gobolka Shabellaha hoose oo ay ka mid tahay gaari Homy ah oo qoriga Baasuukaha ah ay ku dhufteen iyo reer gurigooda deganaa oo ay gaadiidkooda jiirsiiyeen.
Ayuub Ismaaciil oo ku soo baxay doorashada xubnaha aqalka sare ee Gobolka Waqooyi
Afar ruux oo ku geeriyootay dab la qabadsiiyay gurigooda deegaanka Bandiiradley